Farriimo jacayl oo cajiib ah oo loogu talagalay wiilka aad jeceshahay (Udir) - Aayaha
Waa muhiim in lamaanaha ay isu diraan farriimo jacayl si ay iskugu muujiyaan jacaylka aanan baaba’eyn iyo dareenka ay isku qabaan.
Inaad farriin jacayl oo cajiib ah aad u dirto wiilka aad jeceshahay ama seygaaga waa hab qurux badan oo aad ku tusi karto jacaylka aad u qabto iyo sidaad uga fekerto.
Hoos ka aqriso farriimo cajiib ah oo loo diro wiilka aad jeceshahay.
1. Waxaan doonayaa inaan ku ogeysiiyo inaysan jirin qof iikaa bedeli karta. Muuqaalkaaga, sidaad had iyo jeer u ogtahay waxan ka fekerayo, qaabka aad hab iisiisay markaan aad ugu baahnaa iyo waliba qaabka aad ii dhageysatay waa mid aad qaali u ah. Waxaad ii tabatay si qoto dheer oo ka duwan sidaan maleeynayay. Waanku jeclahay.
2. Si buuxdo Ayaan kuu jeclahay. Waxaan kasoo toosaa anigoo kaa fekeraya waxana seexdaa anigoo raba inaan riyada kugu arko.
3. Maalin kasta waxay u egtahay mid farxad leh tan iyo markaan kula kulmay. Waxaan dareemayaa inaan nasiib badanahay oo aan ku sharfanahay inaan ku jeclaado si kal iyo laab ah. Waadku mahadsantahay inaad jacayl ila wadaagtay. Run ahaantii waa hadiyad cajiib ah. Mar walba waanku jeclaan doona.
4. Subax walba oo aan kaco qalbigaad iiga jirtaa. Waa layaab sida aan ku joojin Karin ka fekerkaaga.
5. Lixdii bilood ee lasoo dhaafay xitaa maanan kulmin, hadana waxaa tahay qofka ugu muhiimsan nolosheysa, sidaa darteed waxan hadda rabaa inaan dhaho waanku jeclahay, ma sugi karo inaan mar kale ku arko. Waanku jeclahay.